Neymar Jr ayaa Ku Biiraya Real Madrid.. | Goolasha
You are at:Home»BundusLiga»Neymar Jr ayaa Ku Biiraya Real Madrid..
By Goolasha on	 February 28, 2019 BundusLiga, Champion league, England Premier league, Europe league, General, Italian Serie A, Laliga, League 1, Lifestyle, Miscellaneous, Mobiles, More Noobism, Newbie, Non classifié(e), Opinion, Phones, Picks, Research, Somaliya, Taariikhaha, Tidbits, Uncategorized, Wararka Maanta, Wararka suuqa, World Cup
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa maamulka Real Madrid siiyay liis dheer oo dalabyo ah sida ay shaaciyeen warar laga helayo dalka Spain. Neymar Jr ayaa ilaa shan dalab hor dhigay maamulka Bernabeu si uu kooxdooda ugu soo biiri karo.
Florentino Perez ayaa doonaya in dhamaadka xili ciyaareedkan uu isbadal wayn ka samayn doono kooxdiisa oo aan xili ciyaareedkan ku jirin heerkii uu ka doonayay waxaana jira ciyaartoy badan oo heer caalami ah oo uu Perez isha la raacayo kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin Neymar Jr iyo Eden Hazard.
Shabakada Don Balon oo dalka Spain laga leeyahay ayaa shaaciyay shuruudaha ama dalabyada uu Neymar Jr hor dhigay kooxda Real Madrid si uu uga soo bixi karo PSG isla markaana uu Bernabeu ugu soo biiri karo.
Neymar Jr ayaa sida warkan lagu sheegay doonaya in Real Madrid ay iibiso ciyaartoy hadda ka tirsan liiska uu Solari ku shaqeeyo wuxuuna sidoo kale doonayaa in Bernabeu la keeno xidigo kale oo uu u arko in ay muhiim u noqon karaan Bernabeu.
Ugu horayn waxaa warkan lagu sheegay in Neymar Jr uu dalbaday in Real Madrid haddii ay isaga doonayso ay marka hore iibiyaan Raphael Varane iyo Marco Asensio iyada oo inta badan ka ciyaara booska uu Neymar hibada gaarka ah u leeyahay halka Varane uu u arko in tan iyo koobkii aduuka wixii ka danbeeyay uu awoodiisii lumiyay.
Waxa kale oo arbixintan lagu sheegay in dalabka saddexaad ee ku xiga Varane iyo Marco Asensio in la iibiyo uu isna yahay in Luka Modric kooxda laga diro isla markaana badalkiisa la keeno Pual Pogba oo ay Neymar Jr saaxiibo dhaw yihiin.
Waxaana warbixintan lagu xusay in Neymar Jr uu doonayo in Santiago Solari laga caydhiyo shaqada Real Madrid isla markaana badalkiisa laga dhigo midkood Joachim Low, Jurgen Klopp ama Mauricio Pochettino.
Haddii ay tahay in warkan la rumaysto, Neymar Jr ayaa doonaya in Real Madrid laga diro Varane, Asensio iyo Modric isla markaana la keeno Pual Pogba si la mid ah in la badalo Solari iyada oo warkan lagu sheegay in uu badalkiisa u arko Klopp oo hadda Liverpool haya, tababaraha Germany ee Joachim Low iyo waliba macalinka ay Madrid waqtiga dheer doonaysay ee Pochettino.
Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii ay Real Madrid wada aqbasho dalab kasta oo uu Neymar Jr miiska u saaro, waxaa arinta ugu wayn ah in PSG ayna gabi ahaanba diyaar u ahayn in ay Neymar Jr iibiso inkasta oo ay Real Madrid u baahan doonto in Neymar uu door ku yeesho qaabkii ay ku heli lahayd.